ဂျေဂျေလင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(1981-03-27) ၂၇ မတ်၊ ၁၉၈၁ (အသက် ၄၀)
ဂျေဂျေလင်း (; ၂၇ မတ်လ ၁၉၈၁ မွေး) သည် စင်္ကာပူလူမျိုး အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ဓာတ်ပြားထုတ်လုပ်သူနှင့် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဂီတဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဂီတခရီးလမ်း ဟူသော အယ်လဘမ်ဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လင်းသည် အကောင်းဆုံး မျက်နှာသစ်အနုပညာရှင်ဆု တဆုနှင့် အကောင်းဆုံး တရုတ်ကျားအဆိုရှင်ဆု နှစ်ဆု ပါဝင်သော ရွှေမယ်လိုဒီဆု သုံးဆုကို ရရှိသည်။
လင်းသည် စင်္ကာပူ၌ မွေးပြီး၊ အင်ဂလိုတရုတ်ကျောင်းနှင့် စိန့်အင်ဒရူး၏ ဂျူနီယာကော့လိပ်တွင် စာဖတ်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်မှုထမ်းခဲ့သည်။
သီချင်းစပ် စွမ်းရည် ကောင်းလှသောကြောင့် သူသည် ကျော်ကြားသည်။ နည်းပြဆရာများ ဖြစ်သော ဘီလီကိုးနှင့် ဆန်းကစ်အင်တို့ လက်အောက်၌ လေ့ကျင့်နေသည့် အချိန် အိုးရှင်းလိပ်ပြာ၌ ရှိစဉ်ကပင် အဆိုရှင်များစွာအတွက် သီချင်းများ ရေးပေးခဲ့သည်။ သူရေးပေးခဲ့သမျှ၌ ထိုင်ဝမ်အဆိုတော် အားမေ၏ သတိရ၊ အားတို၏ လက်လွှတ်ပါ၊ ဟာလမ်ယွီ၏ နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ ကော့မစ်ဘွိုင်းဇ်၏ ''စူပါမင်းနှလုံးသား စသော သီချင်းတို့မှာ လူသိများလှသည်။
စင်္ကာပူတွင်၊ တပ်နီချီတက်ပွဲ၏ စစ်ချီတေး ဖြစ်သော အိမ်ကို ရီမစ်လုပ်ပြီး ဖျော်ဖြေပေးရန် ၂၀၀၄ တွင် အရွေးခံရသည်။ ထိုသီချင်းသည် တပတ်တာအတွင်း ကော်ပီပေါင်း တသန်း ရောင်းချရကာ အာရှတဝန်း အထူး ကျော်ကြား လူကြိုက်များသည်။
၂၀၁၀ မေလတွင်၊ လင်းသည် အာရှပစိဖိတ် အမေရိကန်အမွေအနှစ်တလ နယ်လှည့် ဖျော်ဖြေပွဲ၌ ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် အမေရိကန်တွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၅ တွင် The voice of China (season 4) တရုတ်ပြည်၏အသံ (ရာသီ ၄) အစီအစဉ်တွင် ဟာလမ်ယွီအဖွဲ့၌ အကြံပေးလုပ်ရန် အရွေးခံရသည်။
2003 Singapore Hit Awards Best New Artist (Gold) ဆုရရှိ
2004 Golden Melody Awards Best New Artist Music Voyager ဆုရရှိ 
2005 Singapore Hit Awards Best Local Male Singer ဆုရရှိ
Best Singer-Songwriter ဆုရရှိ
Best Performing Male Singer ဆုရရှိ
Best Local Composition "A Thousand Years Later" from No. 89757 ဆုရရှိ
"No. 89757" from No. 89757 ဆုရရှိ
2006 Compass Awards Best Local Youth Songwriter ဆုရရှိ
2007 Best Local Singer ဆုရရှိ
Best Local Film Song "Summer Breeze" (feat. Kym) from No. 89757 ဆုရရှိ
Singapore Hit Awards Best Local Singer Westside ဆုရရှိ
2008 Compass Awards Best Local Songwriter ဆုရရှိ
Best Local Singer ဆုရရှိ
Best Local Film Song "Freedom" from Westside ဆုရရှိ
Singapore Hit Awards Best Local Singer ဆုရရှိ
2010 Golden Melody Awards Best Mandarin Male Singer Hundred Days ဆန်ကာတင်
Compass Awards Best Local Singer ဆုရရှိ
Best Local Songwriter ဆုရရှိ
2011 Golden Melody Awards Best Mandarin Male Singer She Says ဆန်ကာတင် 
2014 Mnet Asian Music Awards Best Asian Artist ဆုရရှိ 
Golden Melody Awards Best Mandarin Male Singer Stories Untold ဆုရရှိ
2015 Golden Melody Awards Best Composer "Listen Up" from Rice & Shine by Eason Chan ဆန်ကာတင်
Best Single Producer "Listen Up" from Rice & Shine by Eason Chan ဆန်ကာတင်
2016 Golden Melody Awards Song of the Year "Twilight" from From M.E. to Myself ဆန်ကာတင်
Best Music Video "I Am Alive" (feat. Jason Mraz) from Genesis ဆန်ကာတင်
Best Album Producer From M.E. to Myself ဆန်ကာတင်
Best Composer "Twilight" from From M.E. to Myself ဆုရရှိ
Best Mandarin Male Singer From M.E. to Myself ဆုရရှိ
Mnet Asian Music Awards Best Asian Artist ဆုရရှိ
↑ JJ Lin - singer/actor။
↑ (တရုတ်) GIO, Taiwan 15th Golden Melody Awards winners list Archived 25 November 2011 at the Wayback Machine. Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. 12 May 2004. Retrieved 2011-06-20
↑ Birchmeier၊ Jason။ Biography: JJ Lin။ AMG။ 16 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ JJ Lin Earns Autograph-Signing World Record။ CRIENGLISH (2007-07-23)။ 2013-05-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Connecting with American Fans: an interview with JJ Lin and Evonne Hsu။ Asia Pacific Arts (18 August 2010)။ 26 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "《梦想的声音》第二期收视大涨 萧敬腾、林俊杰玩合体" (in zh)၊ 联合早报网၊ 16 November 2016။ 21 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 《梦想的声音2》导师林俊杰回归，什么歌曲让JJ表示压力山大？_娱乐_新闻_新视听网站 (in zh-CN)။ 18 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2018-04-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Biography of JJ Lin" Archived4June 2013 at the Wayback Machine. Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. .JJ Lin Official Website.Retrieved 2013-06-14.
↑ (တရုတ်) GIO, Taiwan 22nd Golden Melody Awards nomination list Archived 25 November 2011 at the Wayback Machine. Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. 13 May 2011. Retrieved 2011-06-20
↑ Mnet Asian Music Awards 2014 Winners။ Mnet Asian Music Awards။4May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျေဂျေလင်း&oldid=623486" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၂:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။